WhatsApp ho an'ny PC, ianaro ny fampiasana azy amin'ny solosainao | Vaovao momba ny gadget
Ohatrinona no nofinofisinay hampiasaina Whatsapp ho an'ny PC. Tonga tao aminay tamin'ny alàlan'ny WhatsApp Web ity fahafaha-manao ity, tamin'ity fomba ity, nanomboka afaka nampiasa WhatsApp ho an'ny Windows PC izahay avy amin'ny mpitety tranonkala rehetra, tsy maintsy nampifangaro ny finday fotsiny izahay WhatsApp Web.
Na izany aza, io dia fiasa izay nijanona teo anelanelany foana, noho izany ny mpampiasa dia nitaky ny fampiharana teratany, programa izay azontsika apetraka hiresahana amin'ny WhatsApp amin'ny solosainay fa tsy mila manokatra mpitety tranonkala, miaraka amin'ny fanjifana angovo sy ny enti-milaza izany. Nanapa-kevitra ny WhatsApp fa handray andraikitra, ary izany no antony, tamin'ny volana martsa 2016, WhatsApp dia nandefa fampiharana ho an'ny PC amin'ny teny Espaniôla, izay amin'ny alàlan'ny fametrahana azy dia ahafahantsika miresaka amin'ny WhatsApp sy ny fifandraisana rehetra aminy haingana sy haingana, dia holazainay aminao ny fomba.
1 Sintomy ny WhatsApp amin'ny PC
2 Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny PC
Raha ny fampidinana WhatsApp ho an'ny PC no tadiavinay dia tsy ho mora ny fomba fiasa, nomen'i WhatApp fizarana vaovao ao amin'ny tranonkalanao ofisialy. Vantany vao miditra isika, dia hitan'ny tranonkala hoe inona ny rafitra miasa ampiasaintsika, ary amin'izay no ahafahantsika mametraka WhatsApp ho an'ny Windows PC amin'ny fomba mora indrindra, fa tsy izay ihany, ny fampiharana dia mifanaraka amin'ny Mac OS X.
La Ny fampiharana WhatsApp dia mifanaraka amin'ny Windows 8, Windows 8.1 ary Windows 10, manokatra fari-maro azo atao amin'ny resaka mifanentana, satria izy ireo dia rafitra miasa.
Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny PC
Izao ny zava-dehibe dia ny fahalalana ny fomba fametrahana WhatsApp amin'ny PC, ary tsy ho mora kokoa izany. Raha vantany vao sintonina avy amin'ny tranonkala efa natoronay teo aloha ny WhatsApp for Windows dia mankanesa any amin'ny fisie "downloads" fotsiny izahay ary manatanteraka ilay rakitra .exe izay alaina. Rehefa vita ny fametrahana dia manomboka ny programa izahay, ary mba hanombohany miasa dia hanaraka ireo dingana mitovy amin'ny WhastApp Web izahay.
Izany hoe, mankany amin'ny sehatr'asa WhatsApp amin'ny finday avo lenta isika ary tsindrio ny safidy "WhatsApp Web", toy izao hisokatra ny fakan-tsary ary azontsika atao ny maka ny kaody "Bidi" izay mampiseho antsika eo amin'ny efijery PC-nay. Hatramin'io fotoana io dia afaka mampiasa WhatsApp amin'ny PC toa ny fampiharana isika.